လင်္ကာ: Loss Of Innocence at the ABSDF (North) or အပြစ်မဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ သူလျှိုတွေလား?
Loss Of Innocence at the ABSDF (North) or အပြစ်မဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ သူလျှိုတွေလား?
by Aye Aye Soe Win on Wednesday, 11 January 2012 at 14:31
ကချင်ပြည်နယ်မှာကျောင်းသားတွေကို ခေါင်းဖြတ်သတ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးကော်မတီဖွဲ.ကာ ဖြစ်ရပ်မှန်ပေါ်ပေါက်အောင် ABSDF ကျောင်းသားတပ်မ တော် က ဆောင် ရွက်မည်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကြေညာချက်တစ်စောင် ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ ဒီအကြောင်း ကို DVB နော်ဝေးအသံ က လွဲပြီး ကျန်တဲ့ BBC, VOA, RFA, Mizzima & Irrawady သတင်းဌာနတွေမှာ ရေးသားဖော်ပြခြင်း ထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိပါ။
ကျောင်းသား ၃၀ ကျော် အသတ်ခံရပြီး လူပေါင်း ၈၀လောက် မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် နှိပ် စက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုတော့ ထုတ်လွှင့်ခြင်းမရှိပဲ တစ်ကိုယ်တော် ဆန္ဒပြ လို့ရဲ က ခေါ်စစ်တဲ့ကိစ္စကိုတော့ သတင်းဌာနတွေကို ဟိုလေးတကြော် ရေးသားထုတ်ခဲ့ကြပါ သည်။
ဒီကျောင်းသားတွေ အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စကို သတင်းလွှင့်တဲ့ DVB သတင်းကို ပြန်ကြည့်တော့လဲ သတင်းမိတ်ဆက် intro မှာတင် တလွဲတချော်ဖြစ်နေတာ တွေ့ ရပြန်ပါသည်။ “သူလျှိုတွေ ကို ဖော်ထုတ်စစ်ဆေးတဲ့ကိစ္စ” ဆိုပြီး မတရား စွပ်စွဲခံရပြီး အသတ်ခံလိုက် ရတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ထပ်ပြီး စော်ကားသလို ဖြစ်နေပါသည်။ သူလျှိုတွေမဟုတ်ပဲ အ သတ်ခံရတာ ဖမ်းဆီး နှိပ် စက်တာတွေ ဖြစ်ခဲ့လို. ကျန်ရစ်သူတွေက အနှစ် ၂၀ ကြာမှ အမှုမှန်ဖော်ထုတ်ဖို. ကြိုးစားလာမှ ဒီကိစ္စကို ငြိမ်နေလို့ မရ တဲ့အ ဆုံး ကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF အနေဖြင့် ကြေညာချက် ထုတ်ရတာကို သိပါလျက်နဲ. DVB သတင်းထောက်တွေက ဆက်ပြီး စစ်ထောက်လှမ်းရေးသူ လျှိုတွေကို ဖော်ထုတ် ခဲ့သည့်ကိစ္စ ဆိုပြီး ရေးသားပြော ဆိုခြင်းကိုက သေဆုံးသွားတဲ့ ကျောင်းသားတွေအပေါ် ထပ်ပြီးမလေးမစားနဲ့ စော် ကားနေ သလိုပါ။
အဲဒီသတင်းထောက်ကို ပြန်လေ့လာလိုက်တော့လဲ သူလဲ လူသတ်တရားခံတွေ၏ အောက်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့် ABSDF အဖွဲ.၀င်ဟောင်း တဦးဖြစ်နေပြန်ပါသည်။ ဒါအပြင် ဒီသတင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းအခြေစိုက် DVB သတင်းထောက်ကလဲ သတင်းထဲမှာ ဟိုဖက်ဒီဖက် မျှမျှတတရှိအောင် မေးမြန်းတာ မဟုတ်ပဲ ABSDF အဖွဲ.က ခေါင်းဆောင်ရဲ့ အသံကိုပဲ အကြိမ် ကြိမ် ထပ်သုံးပြီး ဖြေရှင်းခွင့်ပေးထားပေမယ့် ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေ၏ အသံ၊ ခံလိုက်ရသူတွေဖက် က အမြင်ကိုတော့ ထည့်သွင်းထုတ်လွှင့်တာ မကြားလိုက်ရပါ။ သတင်းတပုဒ်ရေးတဲ့အခါ ၂ ဖက်အမြင်ကို တင်ပြခွင့် ပြောခွင့်ပေးမှ Balance ဖြစ်ပြီး အခုတော့ တဖက်တည်းကိုပဲ အကြိမ် ကြိမ် အသံဖိုင်တွေနဲ. သတင်းရေးထားတော့ တခုခုကို ကာကွယ်ပေးဖို. တဖက်သတ် ဖြေရှင်း ချက်တွေ လုပ်နေသလို ဖြစ်ပါသည်။ ဘာကြောင့် ခံရတဲ့သူတွေ၏ အသံ၊ ခံရတဲ့သူတွေ၏ အမြင်နဲ့ပြောဆိုချက်တွေ အဲဒီသတင်းထဲမှာ ပါမလာခြင်းကို မေးခွန်းထုတ်ရမလိုပါ။ သတင်း ရေးရင် Objective ဖြစ်ဖို့Balance ဖြစ်ဖို. Impartiality ဖြစ်ဖို. Facts ပြည့်စုံဖို. လိုပါသည်။ အဲလိုမဟုတ်ရင်တော့ ခပ်ညံ့ညံ့ ၀ါဒဖြန့် တာထက် မပိုပါ။
ဒါကြောင့် ကချင်ပြည်မှာ ကျောင်းသားတွေ ခေါင်းဖြတ် အသတ်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေဟာ ပြည်ပ သတင်းဌာနတွေကြောင့်ဆိုရင် လူတွေ ဘာမှတောင် အမှန်တိုင်း သိခွင့်ရရှိလိုက်မှာ မဟုတ်ပါ။ အခုတော့ ဆိုရှယ်မီဒီယာခေါ်တဲ့ Facebook, Blogs and Internet Technology တွေ တိုး တက်လာလို့ သာ ဒီလူသတ်မှု ရက်စက်ယုတ်မာမှုတွေကို အခုလောက်အထိ လူတွေ အများ အပြား ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ သိခွင့်ရရှိလိုက်တာမို. သူတို့ ကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမလိုပါ။ ပြည်ပ သတင်း ဌာနတွေကတော့အများစုကနှာစေးနေပြီးSelfCensorလုပ်ကာမသိချင်ယောင် ဆောင်နေပြီး ရေးတဲ့ပြောတဲ့သူကျတော့လဲ သာသာထိုးထိုးနဲ့ကာပေးဖုံးပေးချင်တာကို တွေ့ နေရပါသည်။
Thanks for everyone who offers nothing but truth and courage. aye aye soe win
Aye Aye Soe Win Facebook စာမျက်နှာမှကူးယူဖော်ပြပါသည်။